ခရီးသွားဖို့လိုအပ်​သည်​ — Steemkr
myanmar travel blog writing esteem
ကျွန်တော်က ခရီးသွားမသွားတော့မသိဘူးဗျ ပိတ်ရက်တွေဆို ကိုယ်တတ်နိုင်ရာခရီးများကို သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားလိုက်တာဘဲ အိမ်မှာကိုမနေတာဗျ
ခရီးသွား ခြင်းဟာ ဗဟုသုတ တိုး‌စေပါတယ်‌။
ခရီးထွက်ရတာ အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီး ဗဟုသုတလည်း တိုးပါတယ် ..
ခရီးသွားရတာက ပင်ပန်းပေမဲ့ လန်းဆန်းစေပါတယ်။ မတူဘူးနော် ပင်ပန်းတာနဲ့ လန်းဆန်းတာ
This post has receiveda7.00% upvote from thanks to: @naylinn.
You gota8.97% upvote from @nado.bot courtesy of @naylinn!
အလုပ်လုပ် ရလို့ ခရီးသွားနေရတာ ဟီး
မမလဲ ရွှေစက်တော် သွားဖို့ ရှိတယ် ။တစ်နှစ် တခါတော့ ထွက်ဖြစ်တယ်😁
​ရွှေစက်​​တော်​က​တော့ အကြိုက်​ဆုံးပဲ နှစ်​ခါ​ရောက်​ဖူးတယ်​
v100%$0.04 v n m done. thanks
v100%$0.07 v n m done. thanks
ခရီးသွားခြင်းဟာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေပြီး စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်စေမှာအမှန်ပါ။
ခရီးသွားရတာ တစ်ကယ် စိတ် Relax ဖြစ်စေတယ်